Ny lisitry ny bilaogin'ny mpitsidika anao | Martech Zone
Ny lisitry ny bilaogin'ny mpitsidika anao
Alarobia 22 Janoary 2020 Sabotsy, Janoary 2, 2021 Douglas Karr
Manohy manandrana sy manodinkodina ny valin'ny motera fikarohana ireo orinasa SEO… tsy hijanona fotsiny izany. Matt Cutts an'ny Google dia nanoratra lahatsoratra tsara, Ny fahasimbana sy ny fianjeran'ny bilaogy vahiny ho an'ny SEO misy horonan-tsary iray amin'ny fipetrahany amin'ny bilaogy vahiny ary i Matt dia manome izany ho toy ny fehiny:
Te-hanasongadina fotsiny aho fa misy tranokala manana kalitao ambany na spam izay nidina tamin'ny “bilaogy vahiny” ho tetikadin-dry zareo manangana rohy, ary mahita fanandramana spammy bebe kokoa hanao bilaogy vahiny izahay. Noho izany dia mamporisika ny tsy hanana ahiahy aho (na farafaharatsiny fitandremana) rehefa misy olona manolo-tanana anao ary manolotra lahatsoratra bilaogy ho anao.
Vao haingana izahay mivoaka bilaogera vahiny eto Martech Zone. Tonga tao aminay ny mpanoratra ary nilaza fa te hahazo fampiroboroboana bebe kokoa amin'ny sehatry ny varotra izy ary nanantena ny hanoratra lahatsoratra lalindalina ho anay. Nanolotra azy ny fidirany izahay ary izy no nanoratra ny lahatsoratra voalohany.
Tsy nino aho. Ny rohy dia misy rohy vitsivitsy ao anatiny ao anatin'ilay atiny… vitsivitsy no somary generic fa ny iray tena manokana ary niahiahy aho. Efa nampiditra rohy nofollow ho an'ny atiny ivelany izahay, saingy mbola tsy afaka nanetsika ny zava-misy aho fa tsy votoaty tena kendrena… misy rohy tena kendrena. Lahatsoratra roa hafa avy amin'ny mpanoratra ary izaho dia tsy maintsy nanomboka nanao famotopotorana.
Nojereko ny mombamomba azy Twitter, mombamomba Facebook, mombamomba azy Google+ ary lahatsoratra hafa manerana ny tranonkala. Somary tery ihany ny tsirairay… tsy misy resaka manokana, tsy misy namana, ary misy fanontaniana manontany ny fiaviany na ny niainany ankehitriny. Toa olona noforonina izy na eo aza ny fanangonana lahatsoratra an-tserasera. Mazava ho azy, tsy azoko antoka akory raha izy no mpisolo tena marina.
Ny mololo farany dia ny nangatahako azy ny kopian'ny fahazoan-dàlana hitondra azy. Nanoratra izy ary nanambara fa tsy mahazo aina amin'ny fanomezana izany fampahalalana manokana izany izy. Tsy nangataka fampahalalana manokana mihitsy aho… azony natao ny nanarona ny adiresy an-tranony sy ny angona momba azy manokana. Mila porofo fotsiny momba ny famantarana aho. Tamin'izany no nanesorako ny rohy rehetra tamin'ny lahatsorany sy nanovako ny taratasy fidirana amin'ny fidirana.
Ka… manomboka eto dia izao ny lisitry ny lisitra:
Famantarana ara-dalàna - ity bilaogy ity no fahefana ananako an-tserasera ary mila mitazona ny fiatraikany, ny fanajana ary ny kalitao aho mba hitazomana sy hampitomboana ny fanarahako. Tsy hanao risoriso izany amin'ny mpiblaogy sasany aho.
Fepetra fampiasana - manome toky izahay fa ny mpanoratra dia mahalala ny tanjon'ny bilaoginay - manome ny mpivarotra hevi-baovao momba ny fiakaran'ny fitaovana sy ny haitao amin'ny ezak'izy ireo amin'ny marketing. Tsy ny hivarotra na ny backlink izany! Ny atiny hafa rehetra dia hesorina ary horoahina ny mpanoratra.
Andraikitry ny mpandray anjara - ny mpanoratra rehetra dia hanomboka amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara… midika hoe afaka manoratra atiny izy ireo nefa tsy afaka mamoaka azy irery. Hodinihinay sy avoakanay ny lahatsoratr'izy ireo mandra-pahatongantsika mahazo aina fa takatr'izy ireo izay ataon'izy ireo.
Fanambarana feno - raha misy fifandraisana misy karama eo aminay, ny mpanoratra atiny, ary ny loharanom-pahalalana omena ao anatin'ilay paositra - dia hampahafantarina ny mpamaky ireo fifandraisana ireo. Tsy mampaninona anay ny manome atiny momba ny mpanohana na ny vokatra ary ny serivisy ifandraisanay… fa ny mpihaino anay kosa dia tokony hahafantatra fa misy fifandraisana eo.
Nofollow - ny rohy rehetra dia tsy ho voatanisa ao amin'ny lahatsoratr'ireo vahiny. Tsy misy maningana. Ny tanjonao dia ny hahatratra sy hanala sarona amin'ireo mpihaino marobe sy ny fanarahana azy - fa tsy miverina amin'ny SEO intsony. Aleo hitazona ny laharam-pahamehantsika.
Sary voamarina - izay atiny maso rehetra dia hahazo alalana. Raha tsy manana loharanom-pahalalana ilay bilaogerinay dia hampiasainay ny sary sy tahiry horonantsary. Tsy hahazo faktiora fanodikodinam-bola amin'ny serivisy sary stock aho satria nisy bilaogera vahiny naka sary tamin'ny fikarohana sary Google.
Votoatiny miavaka - tsy mampihetsiketsika atiny avy amin'ny loharano hafa izahay. Izay rehetra soratantsika dia miavaka. Na dia mizara infografika aza izahay dia miaraka amina lahatsoratra iray izay miavaka amin'ny mpihaino anay.
Inona ireo fepetra hafa raisinao hiantohana ny programa fitorahana bilaogy vahiny ao amin'ny bilaoginao izay manampy fa tsy manimba ny laza sy ny fahefana an-tserasera amin'ny fikarohana sy sosialy?
Tags: paikady backlinkbacklinkshosokampitoraka blaogy vahinySEO
Acquia: Inona no atao hoe Sehatra momba ny angon-drakitra?
Mar 26, 2014 amin'ny 3: 10 AM
Asa lehibe Douglas, lahatsoratra lehibe sy voajanahary momba ny zavatra ataon'ireo bilaogera ireo amin'ny bilaogy vahiny. Tsy fantatro hoe nahoana ianao no tsy nifantoka tamin'ireo torolalana ireo talohan'ny nanoloranao hanoratra lahatsoratra vahiny ao amin'ny blôginao. Fantatsika rehetra fa tsy maintsy arahina ireo torolalana ireo ary mila manaraka isika alohan'ny hamelana olona hanoratra bilaogy vahiny ao amin'ny blôginao.